शिक्षण शक्ति आपूर्ति
इलेक्ट्रिक मीटर सिकाउँदै
लम्बाई नाप्ने यन्त्रहरू
गुणवत्ता मापन उपकरणहरू
समय मापन उपकरणहरु
तापमान मापन उपकरणहरू
PS गणित उपकरणहरू
PS वैज्ञानिक उपकरणहरू
MS गणित उपकरणहरू
MS भौतिक उपकरणहरू
कम्पन, वेव, थर्मोलजी उपकरणहरू
स्थिर र वर्तमान उपकरणहरु
विद्युत चुम्बकीय र इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू
अप्टिकल र आणविक भौतिक उपकरणहरु
एमएस रासायनिक उपकरणहरू
एमएस जैविक उपकरणहरू
मानव शरीर रचनात्मक मोडेल
एमएस भौगोलिक उपकरणहरू
संगीत शिक्षण उपकरणहरु
२०१ 65 th 65 औं कुन्मि National राष्ट्रिय शिक्षण उपकरण प्रदर्शनी
बधाई !! २०१ 2014 मा हाम्रो कम्पनी टोक भाग TH 65 औं कुंING्ग राष्ट्रिय शिक्षण उपकरण प्रदर्शनी, यति धेरै घरेलू र ओभरसेया ग्राहकहरू हाम्रो जैविक, रसायनिक, भौतिक, प्रयोगात्मक उपकरणमा रूचि राख्दैछन्।
Lianying आयात र निर्यात व्यापार कं, LTD। कम्पनीको वेबसाइट व्यापक संशोधन
Lianying आयात र निर्यात व्यापार कं, लिमिटेड कम्पनीको वेब साइट व्यापक संशोधन
Yueqing Lianying आयात र निर्यात लिमिटेड
Yueqing Lianying आयात र निर्यात लिमिटेड, कं मे, २०० on मा फेला पर्नेछ। विश्वको सुन्दरताका लागि विश्वमा हाम्रो व्यापार सम्बन्ध स्थापित गर्न र विकास गर्न हाम्रो कम्पनी।
LianYing कम्पनी को सेवा
विश्वव्यापी बजारको एकीकरणको साथ, अधिक र अधिक ओभरसिया खरीददारहरूले चीनबाट सबै प्रकारका उत्पादनहरू आयात गर्दछन्। र चीन विश्वव्यापी शैक्षिक साधनको ठूलो उत्पादक देशको रूपमा, यो केही पक्षहरूमा हानिबाट बाहिरिन्छ। उदाहरण को लागी, उत्पादक उद्यम को फैलाव एक ...
भूकम्पले ग्रस्त क्षेत्रहरूमा स्कूलको लागि मायाको साथ झुकाव
लियानि Company कम्पनीले चीनको शैक्षिक साधन र उपकरण द्वारा १ 15, मे २०० 2008 मा जन्म भएको ऐसिमेटिक प्रस्तावलाई जवाफ दिन्छ। निर्देशकहरूको बोर्ड पछि, disaster.१२ वेनचुआन भूकम्पमा प्रकोप स्कूलमा एसिस्मेटीक सामानहरू दान गर्दछ। Lianying शैक्षिक उपकरण कम्पनी ...
तपाईं हाम्रो पछि लाग्नु पर्छ!
के तपाईंलाई शैक्षिक साधनको बारेमा पर्याप्त जानकारी छैन? तपाईंसँग शैक्षिक साधनको गुणस्तरको बारेमा केहि प्रश्नहरू छन्? तपाईंको टेलिफोन लिन्छ, तपाईंको किबोर्ड ढकढक्याउँदछ, हामीसँग अहिले सम्पर्कहरू! हामी तपाईंलाई शैक्षिक साधन खरीद गर्न मद्दत गर्दछौं जुन गुण र मूल्य सबै एकमा। यो पठाइनेछ टी ...
Lianying विकास गर्दै
वानजाउ LianYing शिक्षण इन्स्ट्रुमेन्ट कं, LTD कम्पनी यस्तो निर्माता हो जसले शिक्षण उपकरणहरूको नेतृत्व गर्ने विश्वको नेतृत्व गर्दछ। चिनियाँ डब्ल्यूटीओमा प्रवेश गर्ने भएकोले र इन्टरनेट जानकारीको छिटो र सजिलो भएकोले यस कम्पनीका उत्पादनहरूको अधिग्रहण विश्व बजारमा विस्तार गरिनेछ। थप रूपमा, ...
हाम्रो सिद्धान्त: Education शिक्षा संग अलग - Society- समाज को समर्पण ——-
Lianying शिक्षण इन्स्ट्रुमेन्ट वेबसाइट को सर्भर ओभरसीमा प्रवेश गरीएको छ।
Lianying शिक्षण इन्स्ट्रुमेन्ट वेबसाइट को सर्भर ओभरसीमा प्रवेश गरीएको छ। यो वास्तवमै मनाउन लायकको चीज हो। नेटवर्क टेक्नोलोजीको द्रुत विकासको साथ, लिआनिying यसमा निर्भर गर्दछ ग्राहकलाई अझ राम्रो सेवा दिनको लागि। थप रूपमा, हामी आशा गर्दछौं कि हामी "२१ औं शताब्दीको कार्यात्मक कक्षा" लाई g मा धकेल्न सक्दछौं।
Lianying उद्यम समूह कम्पनी शाखा
Lianying शिक्षा र टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड
YueQing Lianying आयात र निर्यात व्यापार कं, लिमिटेड
वानजाउ आर्थिक र टेक्नोलोजिकल विकास क्षेत्र इलेक्ट्रोमेकानिकल शिक्षण उपकरण कारखाना